Dharaarihii Ardaynimo iyo Sababihii u Tallowga SNM Wq. Maxamed Baashe X. Xasan. |
Dharaarihii Ardaynimo iyo Sababihii u Tallowga SNM Wq. Maxamed Baashe X. Xasan.
Ayaamo ayay ahaayeen rajooyin iyo higsiyo nololeed ‘tif iyo midhiq’ ka yihiin oo ka buuxaan, cajaledda xusuustuna ay marba dib u soo tufayso. Ayaamo wacnaa oo naftu tebayso, tegey se oo tubta ku carceeray oo aan soo laabasho lahayn. Waa dabayaaqadii iyo horraantii labadii tobanle ee 1970-aadkii iyo 80-aadkii.
Khamiis kasta dharaarihii ardaynimo ee dugsiga sare waxa aannu fadhiisan jirney qolkii saaxiibkayo Jamaal Cali Xuseen ee gurigoodii u dhaxeeyey dalcaddii Biyo Dhacay iyo sinimihii National-ka ee Hargeysa. Waxa uu ahaa qol si wanaagsan u agaasiman. Waxa na wehelin jirey oo marnaba aan naga maqnaan jirin saaxiibkayo Cabdiraxmaan Maxamed Faarax (Jaylaani) iyo buugaagtii maaddooyinka xisaabta, fiisigka, kimisteriga, bayoolajiga, taariikhda iyo juqraafiga oo halkan agtayada tuurnaan jirtey. Aniga iyo Cabdiraxmaan Jaylaani waxaannu ahayn isku fasal. Saddexdayadaba waxa ka dhaxeeyey higsiga yoolkayaga oo ahaa in aannu ugu yaraan foolaadka dugsiga sare ee Faarax Oomaar ka mid ahaanno; haddaannan hoggaaminba.Wax badan baannu taas ka dhabayn jirney.
Jacaylkayagaas waxbarashada aannu u qabney wuu xoogganaa. Waxa uu ku sinnaa oo higsigiisu ahaa illaa heer jaamacadeed iyo shahaadooyinka u sarreeya in aannu isku duubni ku raad joogno ka midho dhalinteeda.Waxase hankayagaas dhexda u fadhiyey oo mar kasta xagal daac ku keenayey waayihii murugsanaa ee siyaasaddii gurracnayd ee gobolka dhammaadkii toddobaatanaadkii iyo horraantii siddeetanaadkii dalka ku baahaysey ee ka dhisaallayd iyo maamulayaashii arxanka darraa ee aayaha ubadka iyo ummadda dib u dhaca iyo halaagga u horseedayey.
Hakashooyin badan iyo kufaa-kacyo ha jiraan, hase yeeshee gudcur madow iyo hungooyin badan oo na hor iyo hareero yuubnaa waannu ka tallaabsannay oo waxbarashadaas kama aannu hadhin, natiijooyinkeediina kama aannu qadin. Jamaal Cali Xuseen waa madaxa Citi Bank ee Galbeedka Afrika, Cabdiraxmaan Jaylanina waxa uu ka shaqeeyaa qaybta xisaabaadka ee Xarunta Dhexe ee Dahabshiil ee Hargeysa. saddexdayaduba waxa aannu hanannay digriiyo jaamacadeed.
Sannadahaas ardaynimadayada ee Hargeysa ee badhtamihii toddobaatanaadka iyo bilowgii siddeetanaadka; qarnigii 20-aad ee aynu dhowaan sagootinney, waxa hoos u sii ciirayey heerkii bulsho-dhaqaaleed ee guud ahaan dadka iyo dalweynihii kala daatay ee Jamhuuriyaddii Dimoqraadiga Soomaaliya ee uu hoggaaminayay xisbigii Kacaanka Hantiwadaagga Soomaaliyeed. Waxa sii kordhayey cadaadiska iyo cubbudhintii siyaasadeed ee taliskii Maxamed Siyaad Barre uu guud ahaan dadka ku hayey, gaar ahaanna kii dusha ka saarraa gobolladii Waqooyiga iyo Mudug oo lagu tilmaami karayey cadaadis qorshaysnaa oo markii dambena isu rogey gumaad iyo cidhibtir qoondaysnaa oo aan kala sooc lahayn.
Halkaas waxa kale oo ka bilaabmay is beddel weyn oo dad badan kala soo dersey dhinaca fikirka iyo in-aragga qofnimo. Waxa dhallinyaro badan ku dhashay dareen ay kaga kufriyayaan dawladdoodii, madaxdoodii xilliyada qaar ay u han-weynaan jireen hoggaamintooda. Waxaan ka mid noqday anigu arday ku sii durkaysey dhinaca mucaarinimada mintidka ah. Wixii xidhxidhiddii dhallinyarada UFO iyo Dhagaxtuurka ka horreeyey saluug kastaaba markii hore ha jiro, hase yeeshee nacayb iyo jidh-diid iima ag oollin dawladdayda iyo madaxdeeda toonna. Sidii dagaalkii 1977 loogu soo jabayba dadka iyo dawladdu way sii kala ilbaxayeen, siina kala durkayeen. Durbaankii badnaa ee dananka dharraqaankiisu dheeraa diririgtiisii yeedhmo way sii taagdarraynaysey. Oogtii Kacaankiiba way sii gabaaraysey . Waxyaalahaas oo dhami waxa ay ahaayeen ifafaalayaal bilow u ahaa gabbaldhacii dawladdii dabkeedu dhamacda dhuxuleed ka kululaan jirey.
Sannad guuradii 1aad ee ka soo wareegatey Gadoodkayagii ardayeed ee 20-kii Feebarweri xuskeedii oo Axad ku beegnaa waxa aan ka mid ahaa koox arday ah oo la qaqabtay. Maamulayaashii dugsiyada ayaa halkii aannu ku xidhnayn naloogu keenay. maamulihii dugsigaygii aan u beddeshey ee Gacan Libaax, Muuse Madoobe, ayaa aniga iyo dhawr arday oo kale naqwo ahaan noola baxay oo naga sii daayey askartii aannu u xidhnayn. Maamule kastaa dhawr arday oo uu weji yaqaanney ama ay si kale isugu xidhnaayeen ayuu ka naqaystay maxaabiistii. Aniga iyo Muuse Madoobe wax aan arday iyo maamulihiis ahayn nagama ay dhaxayn. Keliya waxa uu Muuse ogaa in aan ka mid ahay ardayda ugu waxbarashada jecel.
Jabkii maalintaas ka dhex abqaalmay ardadayadii wada muddaharaadaysey ee dugsigii Sare ee Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa, waa kaas illaa maanta sii socda ee la soo dabbaali la’yahay ee sida cudurka dilaaga aan bogsiinta qumman lahayn ee “Kansar-ka” ugu sii faafaya xididdada iyo halbawlayaasha dhiig-wadeennada ee dadka Soomaalida meel kasta ha joogaane intooda ugu badan. Waa kaas jarjaray ee sida qurub qurubka ah u kitfay xubnihii iyo jidhkii ummadnimo; haddii ay garasho u tahay, is daawaysi u tahay, walaaltinnimo iyo midnimo u tahay, isu hiilin iyo is weheshi u tahay, ummad talo iyo hoggaan leh u tahay, qaran sharci iyo caddaalad fuliya u tahay, ummad cududdeeda midaysa oo ku cad goosata ama isku difaacda u tahay, intan iyo intaas oo kale u tahay iwm! Waa taas la kala diday ee la kala hadfey sidii adhi weere galay.
Miyaan inba meel lagu horjoogin oo lagu weetaynayn sidii maqal kob abaar ah weyd la togan. Miyaan inba meel “haad iyo haan-raawe” ku hilbaysanayn oo la isugu habar-wacanayn! Saw taas cidi cid u ciidmi la’. Saw taas meella “haakah” laga odhan waayey ee laga samayn kari waayey wax nafuhu ku xasilaan ama u soo hiloobaan. Saw taas meella laga abuuri kari waayey maamul caddaalad iyo horumar inta hoos joogta la beegsada oo ku hoggaamiya. Miyaan surbacaadku meel kasta hadhaynayn oo la wada shuf beelin oo dhallinyaradii baaxad soorayaasha lama degaan iyo badda isku miidaaminayn, isku gurayn oo ugu le’anayn sida raabe raabaha ah markii noloshu harraatiday ee ay wax jaheeya waayeen! Saw lama wada cantuugin jabkii siddeetanaadka hortoodii Hargeysa ka bilaabmay ee la wada daawanayey, in badanna xilligaas kuba wiirsanaysey, in kalena kuba farxaysey!
Hargeysi way ka sii daraysey oo waxa ay ku sii durkaysey godankii gabbood falka! Bandowgii lagu soo rogey ka dib jebintii Jeelka Mandheera Jan. 1983 ee SNM-tu fulisey, ayaa weli guudka ka saarrayd. Dadka iyo digaaggu isku mar ayay xeroonayeen. 25-kii March 1983 habeen Jimce ah ayaannu xaqiiqo mur iyo deebaaq ka qadhaadh maggaabinney. Waa saaxiibkaygii koowaad ee dharaarihii ardaynimada Cabdiraxmaan Maxamed Faarax (Cabdiraxmaan Jaylaani) oo haddeer Hargeysa ku sugan iyo saaxiibadayada kale Cabdi Faacuul Diiriye-laangadhe iyo Axmed Ismaaciil Xasan-mataan oo labaduba hadda Ingiriiska jooga. Waxaannu afartayaduba wada Joognaa qolkayga yar ee gurigayaga xaafadda Guryasamo, qaybta Xiddigta, Albeerkada Ilma Cabdi Fingar ka soo eegaya dhinaca waqooyi galbeed. Gorfayntayadu waxa ay ahayd fulinta go’aan qaadasho ku saabsanayd in aannu tallowno; in aannu ku biirno Ururka Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed ee SNM. Caawa waa in aannu ka gudubnaa xuduudda u dhaxaysa labada Talis ee Maxamed Siyaad Barre iyo Mengiste Haile Mariam. Arrintu nooma sahlana, waa in aannu se tallownaa. Xaaladda lagu jiraa waa bandow oo habeenkii waxa socon kara askari iyo nin waalan, maalintiina ishaa la isku xadayaa oo waa nin iyo xeeshii. Hase yeeshee waa in aannu qayrkayo dhinaca ka raacnaa oo tallownaa. Maxaa Hargeysada la haysto na dhex dhigay, maannu aargoosanno oo u soo dagallanno dib u furashadeeda!